नेकपा विभाजन: आफूतिर तान्न केन्द्रीय सदस्य बनाउनेसम्मको प्रलोभन | Safal Khabar
नेकपा विभाजन: आफूतिर तान्न केन्द्रीय सदस्य बनाउनेसम्मको प्रलोभन
मंगलबार, ०६ माघ २०७७, ०७ : ०९
काठमाडौं । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) विभाजित भएपछि ओली समूह र नेपाल–दाहाल समूह एकअर्काका नेताकार्यकर्ता तान्ने रणनीतिमा लागेका छन्।
पार्टी विभाजनपछि अलमलमा परेका नेताकार्यकर्तालाई केपी शर्मा ओली र माधवकुमार नेपाल–पुष्पकमल दाहाल समूहले आआफ्नो पक्षमा ल्याउन केन्द्रदेखि नै बल प्रयोग गरिरहेका छन्।
ओली पक्षले नेताकार्यकर्तालाई आफूतिर तान्न केन्द्रीय सदस्य बनाउनेसम्मको प्रलोभन दिएको छ। नेपाल–दाहाल समूहले पनि उचित जिम्मेवारी दिने र भरसक नेताकार्यकर्तालाई ओलीतिर जान नदिने रणनीति लिएको छ।
तानातानको होड चलिरहेकै बेला ओली समूहले प्रदेश १ मा मुख्यमन्त्री शेरधन राईविरुद्धको अविश्वास प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका पाँच सांसदलाई आफ्नो पक्षमा ल्याएको छ। जसमाया गजमेर, गोपालचन्द्र बुढाथोकी, श्रीप्रसाद मैनाली, कला घले र वसन्तीदेवी यादवलाई ओली समूहले आफूतिर ल्याएको छ।
ओली समूहमा फर्किएका उनीहरूले आफ्नै पार्टी नेकपाको सरकारविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्नु उपयुक्त नभएको भन्दै हस्ताक्षर फिर्ता लिएको जनाएका छन्। यसैबीच सोमबार सोलुखुम्बू पुगेर गृहमन्त्री रामबहादुुर थापाले पूर्वमाओवादी समूहका नेताहरू महेश किराँती, शिशिर राई र श्याम क्षेत्रीलाई ओली समूहमा प्रवेश गराएका छन्।
ओली समूहको ध्यान अहिले युवा कार्यकर्तालाई आफ्नो पकडमा ल्याएर नेतृत्व दिनेतिर छ। रामेछापका पुराना तथा लोकप्रिय नेताहरू नेपाल–दाहाल समूहमा लागेपछि ओली समूहले युवा पुस्ताका दुई नेता आनन्द श्रेष्ठ र पुरुषोत्तम कडरियालाई जिम्मेवारी दिएको छ। कडरिया तत्कालीन एमालेमा नेपाल समूहमा थिए। नगरिक दैनिकमा खबर छ ।
त्रिवि परीक्षा केन्द्रमा अब सीसी क्यामेरा
जग्गा मिच्नेलाई भएन कारवाही
प्रधानमन्त्री ओली वामदेव भेट्न भैंसेपाटी जानु अर्थपूर्ण
केयुकेएलद्वारा वितरण गरिएको खानेपानीमा फोहर
ज्योति लाइफको आईपीओ खुल्यो
ओली समुहको संसदीय दलको बैठक बालुवाटारमा बस्दै
अनुदानको दुरुपयोग धेरै भयो, अब किसानले फिर्ता गर्नुपर्ने गरि अनुदान दिनुपर्छ : प्रधानमन्त्री ओली
हामीले भ्याक्सिन प्रदान गर्ने प्रक्रियालाई नरोकीकन अगाडी बढाउँछौ : अर्थमन्त्री पौडेल
सांसद यादबद्वारा १५ लाखको लागतमा बन्ने कल्भर्ट कल्भर्ट पुलको शिलान्यास
मन्त्रीक्वार्टर पुगेर विप्लवले सम्झौता छिटो कार्यान्वयन गर्न गृहमन्त्री थापालाई दिए दबाब
धनगढीमा रहेको एक फर्निचर स्वरुममा भीषण आगलागी
विश्व स्वास्थ्य संगठनले विश्वका २० देशमा दुई करोड कोभ्याक्स खोप अनुदान पठायो
नेकपा (प्रचण्ड–माधव) समुहका नेता घनश्याम भुषालले किन राखे यस्तो प्रस्ताव ?
घनश्याम भुसाल र शंकर पोखरेलबीच आकस्मिक भेटघाट, मिल्नुपर्छ भन्नेमा दुबै एकमत
ओली पक्षका दुईजना सांसद दाहाल–नेपाल समूहको संसदीय दल‍को बैठकमा उपस्थित
किन डरायो निर्वाचन आयोग निर्णय दिन ?
हेलिकप्टरमा नआउने भए विप्लव, गाडीमै काठमाडौँ आउँदै
वामदेव भेट्न भैंसेपाटी पुगे प्रधानमन्त्री ओली
कवाडी सामान लड्काउने काइदामा किन लागे ती बहादुर ?
के छ सरकार र विप्लव समूहबीच हस्ताक्षर भएको तीनबुँदे सहमति पत्रमा ?
सार्वजनिक भए नेत्रविक्रम चन्द (विप्लव) (हेर्नुहोस तस्विर)
नेत्रविक्रम चन्द (विप्लव) नवलपरासीमा शहीद परिवारसँग भेटघाट गरि काठमाडौका लागि प्रस्थान
लागुऔषध ब्राउनसुगरसहित युवक पक्राउ
अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा कांग्रेस बोल्दैन्: देउवा
भरतपुरको भेटेरेनरी अस्पताललाई व्यवस्थित बनाइँदै
संसद् पुनःस्थापनापछि राष्ट्रपतिलाई घर पठाउँछौं: गगन थापा
सहकारीमार्फत होटल सञ्चालन
भरतपुरका अधिकांश सिसीटिभी सञ्चालनमा छैनन्
शिक्षकले तलब नपाउँदा विद्यार्थीले गरे विद्यालयमा तालाबन्दी
कर्मचारी बढुवासम्बन्धी विवादले नेपाल राष्ट्र बैंक तनावग्रस्त